မီးမွှေးသူများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မီးမွှေးသူများ
ပထမဆုံး မီးမွှေးသူက မသီတာထွေး အသတ်ခံရတဲပုံကို အင်တာနက်မှာတင်သူပါ။ရခိုင်လူမျိုးတွေ ကိုသွေးဆူစေပါတယ်။ကိုယ့်အတွက် အကျိုးမရှိသလို တစ်ဖက်သားမှာ
နာကြည်းစွာခံစားရတယ် ဆင်ခြင်တရားမဲ့စွာ လုပ်လိုက်တာပါဘဲ။ဒီ ဓါတ်ပုံမျိုးက အမှန်ဖြစ်ပေမဲ့ မတင်သင့်တာအမှန်
နောက် ထပ်မီးမွှေးသူက အစိုးရသတင်းစာရဲ့ အကြင်နာမဲ့စွာ စာနာမှုမဲ့စွာ ရေးလိုက်တဲ့ မွတ်စလင် ကုလား ဆိုတဲ့ ယုတ်ညံ့လွန်းတဲ့အသုံးအနှုန်းပါ။အကြောင်းမဲ့အသတ်ခံရ
တာကိုု ကြင်နာစွာ ဖေါ်ပြပေးရမဲ့အစား ဝမ်းသာတဲ့ အကြောင်း ဖေါ်ပြတဲ့အရေးအသားဖြစ်နေပါတယ်။နိူင်ငံထဲက ပညာတတ် စာပေသမားတွေ ရေးတာတောင် ဟိုဖြတ်ဒီဖြတ်
လုပ်တဲ့ ဆင်ဆာ လုပ်နေတဲ့ဌာနက ဒီလိုရေးလိုက်တာကြောင့် သွေးဆူတတ်တဲ့ အုပ်စုနှစ်ခုကြား ဥပဒေမဲ့လုပ်ရပ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးက တမင်ဆူစေအောင်ရေးလိုက်တယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။ သူဟာ သဘောထား သေးသူဖြစ်ပြီး ဒေါ်စုအပေါ် မနာလိုမှု ကြီးမားလို့ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်အောင်ကြံလိုက်တာပါ
မွတ်စလင် ကုလား လို့သုံးနှုန်းလိုက်တာက တကယ်ပဲ ယုတ်ညံ့လွန်းတယ်တဲ့လား????
လူဟားတော့ တသက်လုံး အဲဒီလို ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲနေတာပဲ ကြားခဲ့ဖူးပါတယ်..။ မွတ်စလင် ကုလားလို့ ခေါ်တာကို မကြိုက်ပါလား ဆိုတာကိုလည်း ဒီ အရေးအခင်းကြီးဖြစ်မှ သိရတော့တယ်..။
မွတ်စလင် နဲ့ ကုလား ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို တွဲမသုံးကြလေနဲ့ အို ရွာသူား အပေါင်းတို့ ..။
“မွတ်စလင်ကုလား” ဆိုသော စကားစုသည် အင်မတိအင်မတန်မှ ယုတ်ညံ့သော စကားစု ဖြစ်ပါကြောင်း.. ဆော်ဩလိုက်၏ ..။
Muslim ဆိုတာလူမျိုးနွယ်၊ Islam ဆိုတာကိုးကွယ်ယုံကြည်ရာဘာသာ။
ကိုယ်ထင် ကုတင်ခြေလေးချောင်း ..အဲ အဲ ..ကုတင်ရွှေနန်းပေါ့ ..
လူအမျိုးမျိုးရှိတော့ ထင်ရာမြင်ရာ စိတ်အမျိုးမျိုးပေါ့ …
အဲတော့ ..မီး တော့ ထပ် မ မွှေး ကြ ပါနဲ့တော့ လို့ …
လောင်ပြီး လို့ ငြိမ်းခါစ ပဲရှိသေးတာ ထပ်အလောင်မခံသင့်တော့လို့ပါ …
ထင်ရာမြင်ရာ ပွားသွားပါ၏ …
(…….) နာမည်နဲ့လိုက်ပါတယ် ကိုယ့်ဟာကို်ယ်တောင်ဘာလို့ခေါ်မှန်းမသိပဲနဲ. တစ်သက်လုံးခေါ်ခဲ့တယ်တဲ့… မြန်မာဘုရင်များလက်ထက်ထဲက နာမည်ရှိမှန်းမသိ မရှိမှန်းမသိ…. မပီကလာပီကလာနဲ့ ခေါ်ချင်သလိုလျောက်ခေါ် …. ဖိလစ်ဒီဘရစ်တို ကိုတောင် ငဇင်ကာဖြစ်အောင်ခေါ်ခဲ့တော့ ဒီလို အမွေတွေကျန်ခဲ့တာ မဆန်းပါဘူး… ဟူး…. စိတ်လေတယ်… Muslim ဆိုတာလူမျိုးနွယ်၊ Islam ဆိုတာကိုးကွယ်ယုံကြည်ရာဘာသာ။ credit to maungmyenyo… အခုပြောလိုက်လို့လဲနောက်ပြောင်းသွားမယ်မထင်ပါဘူး… သိသိမသိသိ ဒီလိုပဲခေါ်မယ်ကွာ ဆို့တဲ.စိတ်
ဤ အကြောင်းအရာ အများစုသည်ကား စေ့စပ်ညှိနှိုင်း၍ မရနိုင်သောအရာတခုသာဖြစ်ပေ၏..၊
သို့ပါသောကြောင်း အဆင်ပြေစေရန်အလို့ငှာ အငြင်းမပွါးကြစေလိုကြောင်း…..
လူသားအချင်းချင်း စာနာစိတ် ထားသည်သာလျှင် အကောင်းဆုံးထင်ပါကြောင်း….။
မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမ အတိုင်းနေကြပါ၊ မေတ္တာရှေ့ထားပြီး ကံ ကံ၏အကျိုးလို့ဘဲ …..
ချီးစားပြီးကမ္ဘာကလူတွေယုံမလား . . .
hnin sai ရေ…..
ပစ္စည်းတွေအကုန်သိမ်းပြီး ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်မီးရှို ့၊ပြီးတော့ ဘင်္ဂလားကိုပြေး
ဟေ့ကောင် သတင်းတစ်ခုထဲ ဖတ်နေတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူး။
သောက်ရှက်မရှိပြောနေတာကွ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လဲ ပြန်စဉ်းစား မင်းတို့ရဲ ့ပထွေး BBC/RFA/DVB/
ဘာတွေအော်နေတာလဲ။နားထောင်ကြည့် ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာ ဦးဏှောက်ရှိတဲ့ လူတိ်ုင်းသိတယ်ကွ ကုလားစုတ်ရ။
ဒီမိုကရေစီဘိုးအေနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ အန်ကယ်ဆမ်တို့တိုင်းပြည်မှာတောင် တချို့စကားလုံးတွေမသုံးရပါခင်ဗျာ။ ဥပဒေအရမတားထားတော်လည်း ဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်သာရအရမိမိလွပ်လပ်ခွင့်ဟာ တခြားလူရဲ့လွပ်လပ်ခွင့်ကိုထိုက်လာရင်တော့အများကြီးပြဿနာရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ လူမျိုးတမျိုးကိုသူတို့မကြိုက်တဲ့ အခေါ်အဝေါ်နဲ့လဲမခေါ်ရပါဘူး။ဥပမာ လူမည်းတွေကိုနီဂရိုးမို့လို့ နီဂရိုးလို့သာခေါ်လိုက်လို့ ကတော့ပြဿနာအကြီးကြီးတက်သွားနိုင်ပါတယ်။ မယုံသူများ အန်ကယ်ဆမ်တို့ဆီရောက်ရင်စမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ် ။ဖြစ်သမျှပြဿနာတာဝန်မယူပါ။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းလောက်ကLinsanity လို့နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့Jeremy Lin ကို Chink လို့ခေါ်ခဲ့တဲ့ESPN က reporter ဆိုရင်အလုပ်ပြုတ်သွားပါတယ်။
နောက်တခုမြန်မာ သတင်းစာဂျာနယ်တွေမှာမဖြစ်သင့်တာလေးတွေ ပါနေပါတယ်။ အမှူကြူးလွန်တဲ့ သူကိုတရားရုံးကအပြစ်ရှိကြောင်းအမိန့်မချမခြင်း တရားခံဆိုပြီးမရေးရပါ။သံသယရှိသူPolice suspect အဖြစ်သာရေးရပါမည်။ သတင်းစာဂျာနယ်များတွင်တရားခံ၏ မိဘနာမည်ထည့်ခြင်းကိုလည်း မတင့်တော်ဟုထင်ပါသည်။ မိဘများအပြစ်ကြူးလွန်ခြင်းမဟုတ်သည့် အတွက်မထည့်သင့်ပါ။ လူမျိုးဘာသာသည်လည်းထိုတရားခံကြူးလွန်သည့်အမှူနှင့် သက်ဆိုင်မှူမရှိသည့်အတွက်မထည့်သင့်ပါ။
မိမိအမြင်သာဖြစ်ပါသည်။ လွတ်လပ်စွာသဘာကွဲလွဲခွင့်ရှိပါသည်။ သင်ဆဲလိုက်ရ၍စိတ်ချမ်းသာသွားမည် ကမ္ဘာကြီးအေးချမ်းသွားမည်ဆိုပါက အားရပါးရဆဲနိုင်ပါသည်။
အယ်လ်အေမှာ.. ဂျပန်တွေ..အမဲတွေကိုနောက်ချင်ရင်.. ကိုယ်ကလူ၃-၄ယောက်လောက်ရှိတယ်ဆို…” နီးဂရိုး” လို့အော်ပြီး ပြေးတာ..
အသားမဲ..အခြေအနေမဲ့က.. ဒေါကန်နေတာကိုကြည့်ပြီး.. ပျော်ကြတာ..
ရန်ကုန်မှာလည်း မီးမွေးတဲ့သူတွေက စပြီး တော့မွေးနေကြပါပြီ။ မလောင်ခင်တားကြပါစို့။
ရန်ကုန် မှာ အဓိကရုဏ်း အတွက် မီးမွှေးမှု တွေ လုပ်
ယနေ့ နံနက် အစောပိုင်းက ရန်ကုန် တိုင်းဗဟန်း မြို ့နယ် ကုက္ကိုင်းလမ်းဆုံ နှင့် တက္ကသိုလ်ရိပ်သာ လမ်းမီးပွိုင့် ကြား ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်းပေါ် ရှိ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် ပလီ အရှေ့တွင် မော်တော် ကားတစ်စီး ဖြင့် တိုက်ခိုက်ရေးတွင် အထူးလေ့ကျင့်ထား သည်ဟုယူဆရသော အရွယ်တူသန်မာ ဖြတ်လတ်သော သူ လူ ၅ဝ ခန့်အား ချပြီး အချိန်ကိုက်ပြန်လာခေါ်သွားကြောင်း သိရှိရပါသည်။
အဆိုပါ အကြမ်းဖက်သမားများသည် ပလီ၏ ဆိုင်းဘုတ်နှင့် မျက်နှာစအုတ်နံရံအချို့အားဖျက်စီးခဲ့ကြောင်းပလီပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းရောင်းသော ဆိုင်တစ်ဆိုင် အပါအဝင် ဆိုင် ၃ ဆိုင်အားဝင်ရောက်ဖျက်စီးခဲ့ကြောင်း FNG မှ သတင်းရရှိသည်။
”အဲဒီလာဖျက်စီးတဲ့သူတွေက သာမာန် အရပ်သားတွေနဲ့ မတူဘူး အတော်လေးကို စနစ်တကျ လေ့ကျင့်ထားတဲ့သူတွေနဲ့တူတယ် အမိန့်တစ်ခုအောက်မှာ ဝုန်းကနဲ့ရောက်လာပြီး ဖျက်ကြတယ်ပြီးတော့ ချက်ခြင်း အချိန်ကိုက်လာခေါ်တဲ့ကားပေါ်ကိုတက်ပြေးသွားကြတယ်ဟု အရပ်အမောင်းတွေက ကောင်းတယ် တညီတည်းပဲ တော်တော်စနစ်တကျ လာဖျက်သွားတာ” ဟု ပလီပတ်ဝန်းကျင်တွင်နေထိုင်သူ မှ ပြောသည်။
အခင်းဖြစ်ပွားချိန်အပြီး မြို့နယ်ရဲမူးက ဒေသခံပြည်သူ အနည်းငယ်ကို အမူမဖွင့်ပါနဲ့ မီဒီယာကို မခေါ်ပါနဲ့ဟုပြောသွားကြောင်းသိရှိရပါသည်။
အဆိုပါ အခင်းဖြစ်ပွားမှုအား ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး အတွင်းပါဝင်ခဲ့သော ဆရာတော်တချို့က ရန်ကုန်မြို့အား ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်စေချင်သဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ဟန်တူသည်ဟု ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
မြို့တော်ခမ်းမ တွင် ရန်ကုန်တိုင်း ဝန်ကြီးနှင့် လုံထိမ်းအဖွဲ့ အပါ အဝင် အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့ ကြီး ၅ ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများ မှ ၂၄ နာရီ အခြေအနေအား စောင့်ကြည့်လျက်ရှိသော်လည်းအဆိုပါ ဖျက်စီးခံရမူနှင့်ပတ်သက်ပြီး ယခုအချိန်အထိ တစ်စုံတစ်ရာ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းများမတွေ့ရသေးကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ယခု သီတင်း ပတ် အတွင်း ရခိုင် ပြည်နယ် တွင် ဖြစ်ပွား ခဲ့သည့် မငြိမ်သက် မှု များ တွင် အနည်းဆုံး လူ ၂၉ ဦး သေဆုံး ပြီး ၊ အိမ်ခြေ ၃၀၀ဝ ကျော် မီးရှို ့ဖျက်ဆီးခံရ ကာ ၊ လူပေါင်း ၃၀၀၀ဝ ကျော် အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ ဖြစ်ပွား ခဲ့ ရသည်။
ယမန်နေ့က ရန်ကုန် မြို ့တွင် ဆူပူအကြမ်းဖက် မှု များ ပြု လုပ် မည် ဟု သတင်း ထွက်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း တင်းကျပ် စွာ ချထားသည့် လုံခြုံရေး ကြောင့် ငြိမ်သက် နေခဲ့ သည်။
ညက ဂျာနယ်တစ်ခုရဲ့ facebook မှာ ၈ ယောက်လို့သာ ရေးထားပါတယ်။ ခဲနဲ့ပေါက်ပြီးထွက်ပြေးတယ်လို့ဘဲ ပါပါတယ် ။ the voice လား 7days လားတော့မမှတ်မိဘူး ။ အခုပြန်ရှာတာ မတွေ့တော့ဘူး။
ခဲနဲ့ပေါက်တာနဲ့ ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးတယ်ဆိုတာတော်တော် ကွာတယ်နော်။
ဆောဒီး .. သစ်ထူးလွင် ဆိုဒ်မှာပါ .
ဒီလိုပါပဲ ဖွတဲ့သူတွေကဖွ ဟိုတယောက်လို တဖက်စီးနင်းလုပ်ကြံပြော
အဲလိုတွေနဲ့ သံသရာ လည်နေမှာအမှန်….
တစ်က ပြန်စမယ်ဆိုရင် ခက်ကုန်မယ်နော…..။